I-Semalt ichaza Izinkomba Eziyinhloko Zokusebenzisa I-Website Crawlers
Abakwa-Site crawlers yibobhu ekhonjiwe ngokukhethekile, eshaya isayithi lakho kukho konke okuqukethwebese uyibhala ezinjini zokusesha zokubonakala. Kwezinye izimo, sibeka okuqukethwe kokuqukethwe kwewebhu ngendlela abahlukumezayo abahluleka ngayoukuthola. Noma yiluphi ulwazi, olungatholakali ngabakwa-web crawlers ngokuvamile alukhokhelwe yi-Google. Ngenxa yalokho, akuyona eyakhoizici zesigaba naphezu kokuchitha imizamo yakho ye-SEO. Lokhu kungalazi iphutha lokwakha iwebhu abantu abakwenzayo lapho bezama ukubeka amawebhusayithi abo - dawg diggidy.Ngenxa yalokho, kubalulekile ukugijima abakwa-crawlers kusayithi lakho ukwenza izinguquko eziyisisekelo nokulungisa amaphutha, okungahle kunciphise isimo sakho.
Uchwepheshe we i-Semalt Izinsizakalo Zedivolumu, uJack Miller uchaza izici eziyinhloko zokusebenzisa abakwa-crawlers kuwebhusayithi yakho.
Ukubaluleka kokusebenzisa abakwa-Crawlers
Abakwa-Crawlers bangakubonisa lokho izethameli ezibonayo. Abanomabhizinisi abaningi benza amawebhusayithi kuphelafuthi babeke okuqukethwe, bacabanga ukuthi abasebenzisi babo abahlosiwe bayokubona ngokuqinisekile, bekhohlwa ngezinye izici ezingenza kube nzima.Yilokho lapho abakwa-web crawlers beza khona. Abakwa-Web crawlers bafinyelela ezindaweni ezifihliwe kakhulu kuwebhusayithi yakho. Bangakubonisa ukuthi ulahlekileulwazi lomkhiqizo kanye namaphutha amaningi akhona ohlelweni lwakho lokuphatha okuqukethwe.
1. Ukusebenza kwekhasi lokulandela
Esinye sezici ezibalulekile ze-SEO siqapha ukuqhubeka kwamakhasi ngabanye. Iwebhuabakwa-crawlers bangakhetha ama-analytics abo kanye namamethrikhi avela emithonjeni ehloniphekile njenge-Google Analytics ne-Google Search Console. Bangasiza futhiulandelela ukusebenza kwamakhasi ahlukene, kukunika ulwazi olubalulekile lokuhlela ulwazi lwakho ukuze uthole ukusebenza okungcono kwe-SEO..
2. Ukulungisa amaphutha ezobuchwepheshe
Esinye sezici ezinganciphisa ukusebenza kwakho kwe-SEO yizindaba eziphathelene nesayithi lakhoisivinini nokuphendula. Ukugijima i-crawler elula kubuyisa ikhodi yokuphendula kunzima kunoma iyiphi i-URL kusayithi lakho. Amaphutha nokuqondisa angalungiswangokushesha usebenzisa ezinye zezihlungi zabo njengeziphutha ze-404. Bangakwazi futhi ukukunika ulwazi ngezixhumanisi zakho zangaphambili zokuqondisa kabusha kanye nezinhlobonhloboizindawo zithumela ulwazi lwabo.
3. Abakwa-Crawlers bangathola okuqukethwe okulahlekile
Abakwa-Crawlers bangakwazi ukubona "imiyalo" ayikho. Lezi zindawo kumawebhusayithi wakho lapho amabhuayikwazi ukufinyelela. Ukusebenzisa lolu lwazi, ungenza izinguquko ezidingekayo kwisakhiwo sakho sokuphatha okuqukethwe bese ubhala konke okuqukethwe kwakho.Izigaba zomkhiqizo namaqembu anebhokisi lokuhlola elilahlekile angathola izibuyekezo ku-database yakho.
4. Ukuthola nokulungisa okuqukethwe okuphindwe kabili
Kwezinye izinhlelo zokusebenza, abakwa-crawlers bangathola okuqukethwe okuphindwe kabili. Le datha okuqukethweokuvela ngezixhumanisi eziningi ezinjini zokusesha. Okuqukethwe okunjalo kubi nge-SEO yakho futhi kuphelela ekunciphiseni igunya lewebhu lakhoamakhasi. Abakwa-Crawlers bangakusiza ukuthi ubone amaphepha anjalo futhi akusize ekukulungiseni ngo-301 ukuqondisa.
Abakwa-crawlers bangawabona izinto ezifihlekile ezivela kwisayithi lakho okungase kuthinteisayithi lakho ngokungaqondile. I-SEO yinqubo eyinkimbinkimbi, engabandakanyi ukulandelela okufanele nokulandela ulwazi lwabagibeli,kodwa ukubuyekezwa okuqhubekayo kokuqukethwe kwakho. Abanye abakwa-web crawlers abafana nabakwa-Screaming Frog sika-SEO Spider noma Semalt Analyzer yenza njengabafana abashayeli be-search engine. Bangakunikeza ngolwazi olubalulekile, okungaba usizo ekwenzeni izinguquko ezidingekayookuqukethwe kwakho kuwebhusayithi ukuze uthole izinga eliphakeme emibutweni yosesho ephilayo yemvelo.